Haintrano nahatsiravina tany Ikalamavony : lasa very saina ilay rangahy tompon-trano | NewsMada
Haintrano nahatsiravina tany Ikalamavony : lasa very saina ilay rangahy tompon-trano
Par Taratra sur 26/07/2016
Tsy afa-niresaka mihitsy ilay rangahy tompon’ilay trano nirehitra ka nahafatesana olona 38, tao Ambatolava Ikalamavony, ny asabotsy hariva teo.Tao amin’ny trano iray nifanila tamin’ilay nirehitra izy tamin’io fotoana io. Voa ny sainy noho ny voina nitranga. Efa nisy fotoana tsy salama saina rahateo izy io, araka ny voalaza.
Mbola nisarika ny sain’ny maro ilay loza mahatsiravina nitranga ny asabotsy teo tany Ikalamavony. Fianakaviana akaiky ilay rangahy tompon-trano sady iray fasana aminy ny sasany amin’ireo olona namoy ny ainy tamin’ity loza mahatsiravina ity. Isan’izany, ny reniny, ny vadiny, ny zanany fito mianadahy ka izany rahateo no isan’ny nahavery saina azy, raha ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana. Ankoatra ny fianakaviany, misy namany tena akaiky azy koa kilan’ny afo. Vokatry ny fahamaizana sy hasemporana avokoa no nitarika ny fahafatesan’ireo niharam-boina miisa 36 raha kilan’ny afo tsy nisy namantarana azy intsony kosa ny roa ambiny, raha ny fanazavana.
Tsiahivina fa nanao sao-drazana tamin’ny alalan’ny fitokanan-trano vaovao ireto fianakaviana niharam-boina ireto, ny asabotsy teo. Nanomboka ny alakamisy teo ny lanonana ary tsy nifarana raha tsy ny asabotsy izay fotoana nitrangan’ny loza ihany koa. Vahiny marobe no tonga niara-nifety tamin’izy mianakavy tompon’ny fanasana tamin’io fotoana io. Nanangana trano vita amin’ny mololo teo an-tokontany nisakafoan’ny vahiny ny tompon-trano nandritra ity lanonana ity. Tsy lavitra teo koa anefa no nahandro sakafo. Nony efa vita ny lanonana, samy namonjy fodiana ireo nasaina. Izy mianakavy kosa anefa sisa nijanona teo an-toerana ka samy niditra mialoha tany an-trano fa hatory aloha noho ny tahotra ny dahalo.
Voalaza anefa fa tsy maty tsara ny afo ka novelomin’ny rivotra ka nahazo ilay trano mololo nisakafoan’ny vahiny. Niitatra tamin’ireo trano lehibe mifanila taminy indray ny afo taorian’izay. Ny fianakaviana rehetra efa niditra tao amin’ilay trano avokoa izay samy tsy nisy nanampo na inona na inona afa-tsy ilay rangahy tompon-trano izay mbola tao amin’ilay trano mifanila amin’io trano lehibe levon’ny afo io.
Nitondra fanazavana manokana momba ity voina mahatsiravina ity tamin’ny radio tsy miankina iray eto an-drenivohitra, omaly, ny solombavambahoakan’Ikalamavony, Rakotoniaina Ialy. “Fotoana fanaovana lanonana toy ny famorana sy sao-drazana izao ka tamin’izany no nitrangan’ny loza. Tsy naheno ny firehetan’ny trano noho ny hamamoana ireo olona tao an-trano. Ireo olona tety ivelan’ny trano no nahita ny fiantombohan’ny afo”, hoy izy. Karazana trano natsangan’ny olona mba hahafahana mikarakara ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa ity trano namoizana ain’olona ity, raha ny fanazavany.
Voalazan’ny loharanom-baovao iray kosa anefa fa somary mampiahiahy ihany ity voina nihatra tamin’ireto fianakaviana ireto satria toy ny fanahy iniana nampirehetina avy ivelany ny trano, saingy ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny zandary no hamaritra ny marina rehetra momba ity raharaha ity.
Araka ny vaovao farany azo halina, niampy iray indray ny olona maty any Ikalamavony noho ilay haintrano niseho tany an-toerana. Tafakatra 39 izany ny isan’ireo namoy ny ainy.